Kenya ma bixin doontaa jawaabta dacwada badda oo maanta laga sugayo? - Caasimada Online
Home Warar Kenya ma bixin doontaa jawaabta dacwada badda oo maanta laga sugayo?
Kenya ma bixin doontaa jawaabta dacwada badda oo maanta laga sugayo?
Nairobi (Caasimada Online) – Waxaa maanta gabi ahaanba ku eg waqtigii dowladda Kenya loo qabtay inay kaga jawaabto dacwaddii dhanka badda oo dowladda Soomaaliya ay ka gudbisay, waxaana laga sugayaa inay jawaabto la wadaagto maxkamadda Caddaaladda ee ICJ.
Bishii Febraayo ee sanadkaan maxkamadda ICJ waxay go’aamisay in la furi karo galka murun badeedka u dhaxeeyo dowladaha Kenya iyo Somalia, waxaana dhinac walbaa laga dalbaday soo dhameystirka Sheegashada badda.
Dacwadda Badda ayaa waxaa furtay dowladdii uu hogaaminayay madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud, kadib markii dowladda Kenya ay ruqsad siisay shirkado shidaal sahmiya, kuwaasi oo baaritaanka ka sameynayay meel kamid ah biyaha Somalia.
Kenya ayaa ku doodday in muranka biyaha ee labada dal u dhaxeeya ay tahay in ay meel gaar ah oo aan Maxkamadda ahayn ku xalliyaan,hayeeshee Soomaaliya ayaa ka biyaddiiday, waxaana ay ku guuleysatay in Maxkamadda gasho kiisaas oo ilaa hadda taagan.